ज्याकलिन र टाइगर ‘चुम्बन’ मा मस्त
टाइगर श्रोफ पनि सिरियल किसरको बाटोमा छन् । हिरोपंती, बागी र म्युजिक भिडियोसम्म उनले नायिकालाई चुम्बन गरेका छन् ।
रेमो डिसुजाको फिल्म ‘अ फ्लाइंग जट्ट’ मा चुम्बनको कुनै दृश्य नभएको स्थानमा टाइगर र ज्याकलिनको किसिङ सिन समावेश भएको छ ।
स्रोतका अनुसार रेमो रोमान्टिक दृश्य छायांकन गरिरहेका थिए । उनले टाइगर र ज्याकलिनलाई नजिक हुन आग्रह गरे । तर उनीहरुले कुन्नी के सोचे, उनीहरु एकअर्कालाई चुम्बन गर्न थाले । उक्त दृश्य रेकर्ड पनि भयो । पछि रेमोलाई उनीहरुको अनपेक्षित किसिङ सिन निकै मनपर्यो र फिल्ममा जस्ताको तस्तै राख्ने निधो गरे ।
३४ बर्ष अगाडि नै यस्तो घटना भोगेकी छु: नायिका दीया मिर्जा - 2020-02-15
'गुनगुन' मा नीताको आइटम नृत्य - 2020-02-15
'सोसल मिडिया'मा 'एक्टिभ' शर्लिन - 2020-01-09
पूर्व मिस नेपाल शृखला यौन हिंसाको सिकार ! - 2019-12-25
दीपिकालाई फिल्म चोरीको आरोप - 2019-12-25
एजेन्सी : बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको ‘छपाक’ फिल्मलाई चोरीको आरोप लागेको छ। फिल्म रिलिज हुनु दुई साताअघि ‘छपाक’ लाई स्क्रिप्ट चोरीको आरोप लागेको हो। भारतीय लेखक राकेश भारतीले आफ्नो स्क्रिप्ट चोरी गरेको फिल्म तयार भएको आरोप लगाउँदै मुम्बई उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। उनले फिल्ममा ‘लेखकको रुपमा क्रेडिट दिइयोस्’ भनेर अपिल गरेका छन्। ‘मैले एसिड आक्रमणमा परेकी एक युवतीको वास्तविक कथामा आधारित स्क्रिप्ट लेखेको थिएँ। मैले लेखेको स्क्रिप्टमाथि फिल्म निर्माण भएकाले लेखकको रुपमा मलाई क्रेडिट दिनुपर्छ,’ उनले भने
फोर्ब्सले कंगनाको कमाइ थोरै देखाएर 'भ्यालु' कम गराएको आरोप - 2019-12-25
गायक रामकृष्ण ढकालको डिभोर्स - 2019-12-25
काठमाडौ,(प्रस): लोकप्रीय गायक रामकृष्ण ढकालले पत्नी निलम शाह ढकालसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेका छन् । उनीहरुबीच बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सम्बन्ध बिच्छेद भएको हो ।
काइली जेनरका फलोअर २७ करोड ! - 2019-12-07
एजेन्सी : सामाजिक सञ्जालमा सुपर मोडल काइली जेनरका २७ करोड फलोअर पुगेका छन् । काइली आफ्नो व्यापार व्यवसायमा जति चर्चित छिन् त्योभन्दा बढी ग्ल्यामरको क्षेत्रमा पनि निकै अगाडी छिन् । उनकी बहिनी केन्डल पनि यही क्षेत्रमा छिन् ।सेलिब्रेटी बिजनेस उमनको उपमा पाएकी उनी आफ्नो कस्मेटिक कम्पनीको ६१ प्रतिशत सेयर बेचेपछि अहिले चर्चामा छिन् ।
प्रेमीको ओठ दैनिक चुम्बन गर्न मन पराउने प्रियंका - 2019-12-07
राधिका भाइरल ! - 2019-12-07
एजेन्सी : राधिका आप्टे पछिल्लो समय बलिउड फिल्म अन्धाधुनमा देखिएकी थिइन्। फिल्ममा उनी आयुष्मान खुरानाकी गर्लफ्रेन्डको भूमिकामा थिइन्। फिल्म बक्स अफिसमा सुपरहिट भएको थियो। फिल्ममा तब्बु नकारात्मक भूमिकामा थिइन्। यसको कथा दर्शकले निकै मन पराएका थिए। अहिले भने उनी फिल्मभन्दा वेब सिरिजमा बढी ध्यान दिइरहेकी छिन्।
थपियो अर्को हास्यश्रृङ्खला ‘जे होला होला’ - 2019-11-22
‘हरे राम’ लेखेको बिकिनी लगाएपछि बाणी विरुद्ध मुद्दा दर्ता - 2019-11-22
एजेन्सी : बलिउड अभिनेत्री बाणी कपूरले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा हरे राम लेखेको बिकिनी लगाएको तस्बिर सेयर गरेकी थिइन् । उनले बिकीनीमा भगवानको नाम लेखेर धर्मप्रति अपमान गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिएको थियो । यसैबीच, बाणीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकमा प्रकाशित समाचारका अनुसार मुम्बईको एन एम जोशी मार्गमा रहेको पुलिस स्टेशनमा रमा सावन्त नामकी महिलाले बाणीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएकी हुन् ।
अभिनेता अर्जुन रम्पालको २१ वर्ष लामो सम्बन्ध टुंगियो - 2019-11-22
एजेन्सी : बलिउड अभिनेता अर्जुन रामपाल र मोडल मेहर जेसियाले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। अर्जुन र मेहरको २१ वर्षे लामो वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुम्बई फ्यामिली कोर्टले अनुमति दिएको हो।
सुहानाको पहिलो फिल्म रिलिज - 2019-11-22
पक्राउको डरले अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल लुकेर बस्दै - 2019-11-14
रानु मन्डलको फिल्म बन्ने, राष्ट्रिय अवार्ड विजेता अभिनेत्रीलाई प्रस्ताव - 2019-09-26
सलमानले ल्याउने भए 'राधे', अक्षयसँग हुने भो भिडन्त - 2019-09-26
एजेन्सी : अन्तिम समयमा 'इंन्शाल्लाह'को सुटिङ स्थगित भएपनि आगामी वर्षको ईदमा सलमानले नयाँ सिनेमा ल्याइछाड्ने घोषणा गरेका थिए। सलमानले सिनेमा रिलिजको घोषणा गरेपनि कुन सिनेमा उनले ल्याउनेछन् भन्नेमा रहस्य कायमै रहेको थियो। अब भने सो रहस्यबाट पर्दा उठेको छ। आगामी वर्षको ईदमा सलमानको 'राधे' नामक सिनेमा रिलिज हुने भएको छ।
हिन्दी फिल्ममा नेपाललाई आतंकवादी र तस्करहरूको मुख्य थलोका रूपमा प्रस्तुत - 2019-07-03
काठमाडौ,(प्रस)भारतीय राष्ट्रवादको गुणगान गाउन अरू देश, खासगरी छिमेकीलाई होच्याउने काम गर्छ। नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्छ। बलिउडको यो धारबाट सबभन्दा बढी पाकिस्तान र सँगसँगै नेपाल प्रभावित हुन थालेको छ। पाकिस्तान र भारतको मतभेद हामीलाई थाहै छ। हामी यहाँ 'रअ' एजेन्टलाई नायक बनाइएका बलिउडका तीन फिल्मबारे चर्चा गर्दैछौं, जसमा नेपाललाई आतंकवादी र तस्करहरूको मुख्य थलोका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
पूर्व प्रेमीप्रेमिकाको सिनेमा जुँध्ने - 2019-05-08
एजेन्सी : कंगना रनौत र ऋतिक रोशनको मिडिया झगडाले राम्रै चर्चा बटुल्ने गर्छ। मिडियामा ऋतिकको कुरामा कंगनाले राम्रोसँग आलोचना गर्नेगर्छिन्। उनले यस्तैमा अब यी दुबै अभिनित सिनेमा जुँध्ने भएको छ। एकै मितिमा दुई सिनेमा रिलिजको अर्थ दुबै सिनेमालाई घाटा भएपनि कंगना स्टारर ‘मेन्टल है क्या’ र ऋतिक स्टारर ‘सुपर ३०’ एकै मितिमा लाग्ने पक्का भएको छ।
ट्विङ्कलले शेयर गरेको फोटोप्रति केजरीवाल समर्थकहरुको आक्रोश - 2019-04-23
एजेन्सी : अभिनेत्री तथा अभिनेता अक्षय कुमारकी पत्नी ट्विङ्कल बेलाबेला आफ्नो सेन्स अफ ह्युमरका कारण चर्चा सँगै विवादमा आउने गर्छिन् । कुनै जमानामा फिल्ममा ब्यस्त ट्विङ्कल अक्षय कुमारसँग बिहे गरेसँगै घर गृहस्थीमा ब्यस्त छिन् । पछिल्लो समय लेखनमा सक्रिय रहेकी ट्विङ्कल बेला बेला ब्यङ्ग्यात्मक फोटो सामाजिक संजालमा शेयर गरेर विवादमा आउने गर्दछिन् ।
'ठग्स अफ हिन्दोस्तान' फ्लप हुँदा मानिसहरूले रिस फेर्ने मौका पाए: आमिर - 2019-01-31
एजेन्सी : बलिउड अभिनेता आमिर खानले दर्शकलाई कुनै पनि सिनेमाप्रति कठोर हुने पूरा अधिकार भएको जनाएका छन्। उनले 'ठग्स अफ हिन्दोस्तान'को असफलतामा मानिसहरूले रिस फेर्ने मौका पाएको बताए।
Times 1169598	Visited.